Renovables Verdes dia tranokalan'ny Blog Actualidad manam-pahaizana manokana amin'ny angovo azo havaozina sy ny tontolo iainana. Izahay dia mitsabo tsara ny tsirairay amin'ireo angovo be mpitia indrindra amin'ny planeta ary mampitaha azy ireo amin'ny mahazatra. Solosaina manokana izahay izay manome vaovao marina sy henjana.
Ny ekipa famoahana ny Renovables Verdes dia misy vondrona iray manam-pahaizana amin'ny angovo azo havaozina, madio sy maintso, anisan'izany ireo nahazo diplaoma amin'ny siansa momba ny tontolo iainana. Raha te ho anisan'ny ekipa koa ianao dia afaka andefaso aminay ity takelaka ity mba ho tonga mpanonta.
Nahazo diplaoma tamin'ny siansa momba ny tontolo iainana sy ny mari-pahaizana momba ny fanabeazana momba ny tontolo iainana avy amin'ny Oniversiten'i Malaga. Ny tontolon'ny angovo azo havaozina dia mitombo ary lasa mifandraika kokoa amin'ny tsenan'ny angovo eran'izao tontolo izao. Namaky gazety siantifika an-jatony momba ny angovo azo havaozina aho ary tao amin'ny diplaomako dia nanana lohahevitra marobe tamin'ny fiasan'izy ireo aho. Ho fanampin'izay, efa niofana be tamin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny olan'ny tontolo iainana aho, ka eto dia ahitanao ny fampahalalana tsara indrindra momba izany.
Ny injenieran'ny solosaina dia liana amin'ny toekarena manerantany, indrindra ny tsena ara-bola sy ny angovo azo havaozina.
Manolo-tena amin'ny tontolo iainana sy ny antony maha-zava-dehibe ny hitazomana ny zava-mitranga rehetra manerantany sy ny planeta misy antsika. Miaraka amin'ny fikasana hanome fahazavana kely kokoa momba ny manodidina antsika.